नेपाली राजनैतिक नक्षत्रका अजम्बरी योद्धा वीपी कोइराला
२०७५ श्रावण ६ आइतबार, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अजम्बरी योद्धा विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाको आज ३६ औ स्मृति दिवश हो लामो समयको त्याग,संघर्ष र निर्वाशित जीवनबाट दक्षिण एसियामा उचो राजनैतिक कद स्थापित गरेका कोईराला नेपालको प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमन्धी भएर राजनैतिक जीवनमा १८ महिनामात्र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएर पनि चिरकालसम्म सबैको स्मृतिपटलमा रहन र प्रेरणाको स्रोत बन्न सफल कोइराला राष्टिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिका महान् समाजवादी चिन्तक एवम् सच्चा राष्ट्रवादी नेताका रूपमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सुपरिचित छन् । ... बाँकी अंश»
अग्रिम आयकरले महंगि बढ्दैन, मह‌ंगि बढ्ने कुरा अफवाह हाे : अर्थशास्त्री अधिकारी (अन्तर्वार्ता)
२०७५ श्रावण ३ बिहिबार, अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भन्सारकाे अग्रिम आयकरले मूल्यवृद्धि नहुने तर्क गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
मेयर’साव वीरगन्ज महानगरले पेट्रोलियम व्यवसायीबाट कर उठाउन थालेको हो ? (कुराकानी)
२०७५ श्रावण २ बुधबार, वीरगन्ज महानगरपालिकाले १ साउनबाट पेट्रोलियम पदार्थ विक्री गरेबापत वातावरण प्रदूषण तथा सडक मर्मत सुधार शुल्क लिन थालेपछि व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्रीको प्रतिवाद : हुनुपर्ने एकातिर हुँदैछ अर्कोतिर
२०७५ असार ३२ सोमबार, काठमाडौं । यतिखेर देशभरी नै एउटा बहस चलेको छ चिकित्सा शिक्षा सुधारका बारे । सुधारका सन्दर्भमा अहिलेसम्म पछिल्लो आधार मानिएको माथेमा प्रतिवेदन र सुधारका अभियन्ता समेतको सहमतिमा यस नेपाली कांग्रेसको सरकारले एउटा विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो । ... बाँकी अंश»
२०७५ असार ३२ सोमबार, काठमाडौं । १५ पटकसम्म आमरण अनसनमा बसेर चिकित्सा क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्न लागिपरेका सत्याग्रही डा गोविन्द केसीलाई ‘सेप्सिस’ हुने खतरा बढेको छ । जुम्लामा अनसनरत डा केसीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुलाई अहिले सताएको चिन्ता नै डा केसीलाई ‘सेप्सिस’ को हो । ... बाँकी अंश»
अर्को हप्ता काठमाडौंमा अड्किएका युवाहरु मलेसिया जाने बाटो खुल्छ (अन्तर्वार्ता)
२०७५ असार ३१ आइतबार, नेपालबाट मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरु २ महिनादेखि हैरानी खेपिरहेका छन् । तर, मलेसिया जानेबाटो खुल्छ टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन । ... बाँकी अंश»
२०७५ असार ३१ आइतबार, ओली सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको आरोप मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले लगाएका छन् । सरकारको अहिले जुन गतिविधि छ, त्यसले नागरिकको अधिकार कुण्ठित पार्न अधिकारकर्मी प्रसाईले बताए । ... बाँकी अंश»
रूस विश्वकप २०१८ : क्रमभंग या निरन्तरता ?
२०७५ असार ३१ आइतबार, बेइजिङ । रुस विश्वकप २०१८ अन्त्यतिर आइपुगेको छ। अब मात्र एउटा खेल बाकी रहेको छ जसले यस पटकको विश्वकपको विजेता दिनेछ। यस रूस विश्वकपको फाइनल खेल एक पटकको विजेता फ्रान्स र पहिलो पल्ट फाइनल पुगेको अण्डरडग क्रोएसियाबीच हुँदैछ। योसँगै फुटबलप्रेमी र पण्डितहरूमा एउटा कौतुहलता देखिएको छ, के हुने हो? कस्तो नतिजा आउने हो? भन्ने उत्सुकता पनि रहेको छ। ... बाँकी अंश»
डा गोविन्द केसीको आलोचकबाट यसकारण भए म समर्थक
२०७५ असार २८ बिहिबार, काठमाडौं। हिजोसम्म मैले डा गोविन्द केसीको अनसनको धुवाँधार विरोध गर्दै आएको थिएँ। आलोचनाका सारा शब्दहरु रित्याएँ। ... बाँकी अंश»
२०७५ असार २७ बुधबार, सन् १९८१ देखि हरेक वर्ष जुलाई ११ तारिखमा विश्वभरिका जनसंख्याका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी विश्व जनसंख्या दिवस मनाउने गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ असार २७ बुधबार, काठमाडौं । यतिबेला त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक प्राडा गोविन्द केसी आन्दोलनमा छन् । उनको आन्दोलन आजको हैन । यसपटक उनी १५ औं पटक आमरण अनसनमा बसिरहेका छन् । सरकारले चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवा सर्वसुलभ बनाउन माग गर्दै आफ्नो ज्यान डा केसीले दाउमा राख्दै आएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ असार २५ सोमबार, प्रदेश ७ को सरकारले सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेशभित्रको आवागमनलाई सहज बनाउन सरकार आफैंले बस चलाउने योजना ल्याएको छ । ... बाँकी अंश»
शरीरको 'कार्यकारी प्रमुख' मन, आत्मा 'गुप्तचर'
२०७५ असार २५ सोमबार, नयाँ दिल्ली । कुनैपनि जंगमान शरीरमा इन्द्रियको माध्यमले नै सबै किसिमका शारीरिक गतिविधिलाई सञ्चालन गरेको हुन्छ भन्नेकुरा अहिले विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ । अहिले विज्ञानले यो प्रमाणित गर्नु भन्दा सयौं वर्ष पहिले पूर्वीय दर्शनका पक्षपोषक ऋषिमुनीहरुले नै यस विषयलाई पत्ता लगाइसकेका थिए । ... बाँकी अंश»
‘डा गोविन्द केसीले कम्युनिष्टका मुद्धा पो उठाएका हुन् त’
२०७५ असार २४ आइतबार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल चिकित्सक संघ एनएमएलाई समय नदिएको खुलेको छ । एनएमएले आमरण अनसनरत डा गोविन्द केसीका मुद्धाका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन गत शुक्रबारदेखि समय मागे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले समय नै नमिलाएको बुझिएको छ । ... बाँकी अंश»
माननीय मन्त्री बिना मगरलाई खुलापत्रः ' वेदनाकै लागि हामीले मतदान गरेका हौँ त?
२०७५ असार २१ बिहिबार, माननीय बिना मगर दिज्यू, आज बडो दुःखका साथ प्रस्तुत हुँदैछु। अहिलेको केन्द्रिय सरकारमा सात नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित तपाइ मन्त्रीपरिषदमा हुनुहुन्छ । ... बाँकी अंश»
बुढीगण्डकी फेरि चीनको गेजुवालाई ? : यसो भन्छन् पूर्व उर्जासचिव (अन्तर्वार्ता)
२०७५ असार २० बुधबार, सरकारले बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने सेंकत गरेको छ । ... बाँकी अंश»
इतिहासकै कठिन मोडमा कांग्रेस
२०७५ असार २० बुधबार, धरान । निर्वाचनमा पराजय भएको यतिका लामो समयसम्म पनि कांग्रेसले आफूलाई रुपान्तरण गरी गति दिन नसकेको र हारको पीडालाई शक्तिमा बदल्न नसकेको पार्टीमा आन्तरिक एकतासमेत कायम गर्न नसक्दा तीनै तहको सदनदेखि सडकसम्म यतिबेला कमजोर मात्र देखिएको छैन, इतिहासकै कठिन मोडमा कांग्रेस उभिएको छ । ... बाँकी अंश»
अर्थ संवाद : अवैध कपडा आयातले १ खरब ८० अरबकाे राजस्व गुम्याे
२०७५ असार १९ मंगलबार, नेपाल टेक्सटाइल एसोसिएनले हालै मात्र एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अवैध कपडा आयात हुने निष्कर्ष निकालेको छ । ... बाँकी अंश»
चुनौतीपूर्ण बन्दैछ भाइरल इन्फ्लुएन्जा, यसो गरौं
२०७५ असार १८ सोमबार, गत हप्ता ३९ बर्षका पत्रकार तथा कवि मित्र यादब थपलियाको अकल्पनीय रुपमा निधन भयो । ज्वरो, रुघाखोकी लगायतका समस्याको लागि अस्पताल भर्ना भएका थपलियाको भाइरल इन्फ्लुएन्जाजस्तो सामान्य देखिने रोगबाट निधन हुनु अपत्यारिलो बन्यो । यस्ता धेरै घटना दिनहुँ भइरहेका छन् । तसर्थ भाइरल इन्फ्लुएन्जाबारे जानकारी लिनु अपरिहार्य छ । ... बाँकी अंश»
अर्जेन्टिनाको विश्वकप अधूरो सपना
२०७५ असार १७ आइतबार, चीन । होइन, कुनै सपना बाँचुञ्जेल पूरा हुन्न कि के हो? २८ वर्ष अघिदेखि देखेको सपना, गरेको कामना यस पटक पनि पूरा भएन। अब के ३२ औं वर्षमा होला। अँह आशा छैन, पटक्कै छैन। यो जिन्दगी भर छैन, लौजा। २८ वर्ष भनेको ठट्टा हो र? ... बाँकी अंश»